अम्बिका चन्द ओली
आदरणीय र प्रियजनहरु ! ‘जेलमा मार्सी धानको भात खान्छन् सुदर्शन’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछि म केही नलेखी बस्नै सकिन । प्रश्न उठनसक्छ, राजनीति गर्ने नेताहरुको बारेमा गरिने प्रशंसा र आलोचना दुबै स्वभाविक हुन्छन् । किन यस्तो प्रतिक्रिया दिनुप¥यो ? मलाई माफ गर्नुहोला ताली र गाली अथवा एउटा सूचनाले पार्ने प्रभाव र असर भन्दा पनि मलाई सत्य कुरा सबैलाई बुझाउने प्रयत्न मात्र हो ।
कमरेड सुदर्शन महान जनयुद्धका कठिन दिनहरुमा २०५५ साल माघ २९ गते बाजुराबाट गिरफ्तार हुनुभयो र ३ बर्ष जेल बसाइपछि २०५८ सालमा रिहा हुनुभयो । त्यहीबेला हिरासतमा उहाँलाई कुनै दिन नबिराइकन महिनौं दिनसम्म दिएको यातना (पाइपभित्र फलाम राखेर शरीरमा बेल्ना लगाउने, कुटने, झुण्ड्याएर कोर्रा लगाउने, करेन्ट लगाउने, सर्वाङ्ग नाङ्गो पारेर सिस्नुपानी लगाएर घिसार्ने लगायतका अठार आइटमवाला यातनाका कारण अहिले पनि टाउको र शरीरका विभिन्न भागमा ठूल–ठूला खत छन् । जेलमुक्त भएर बाहिर आइसकेपछि सामान्य अवस्थामा सिटामोल पनि नखाने मान्छेको आँखा, टाउको, हातखुट्टा पोल्ने हँुदाहुँदै एकैचोटी धेरै स्वास्थ्य समस्या आयो । अहिले जेजति स्वास्थ्यमा समस्या आयो यो सबै जेल हिरासतको यातनाबाट पाएको उपहार हो ।
उहाँलाई नियमित १२ बर्षदेखि जाँच गरिरहनुभएका डाक्टरको सल्लाहअनुसार हाम्रो परिवार उहाँको स्वास्थ्यप्रति निकै सजग छ । जेलमा भनेअनुसार खाना खाने र मार्सी चामलको भात खाने गरेको भन्ने जुन समाचारमा भनिएको थियो, सत्य के हो भने उहाँले खाएको चामल मार्सी चामल होइन । कालो चामल हो । यो चामलको बजार मूल्य कति हो ? मलाई पनि थाहा छैन । तर, मैले एक जना चिनजानको मान्छेबाट ३ सय रुपैयाँको दरले ५ किलो खरिद गरेकी थिएँ । यो एक किलो चामल दिनमा एक चम्चा जति खाँदा १५ देखि २० दिनलाई पुग्छ । खानलाई मिठो नभए पनि सुगर, प्रेसर, कोलस्ट्रोल र युरिक एसिड लगायतका समस्या भएको कारण उहाँलाई कालो चामलले फाइदा गर्छ भन्ने विश्वासले यो ब्यवस्था गरिएको हो । यो बाहेक जेलमा आवश्यक पर्ने अन्य खानेकुरा बाहिरबाटै लिने गरिएको छ । ढिडो रोटीको लागि पनि घरैबाट जुटाइन्छ । घरमा बनाइएका र कतिपय तयार गरिएका खानेकुरा त जेलको गेटबाट भित्र लिन मिल्दैन । सामान्य त अरु बन्दीलाई भन्दा उहाँहरुको हकमा बढी निगरानी गर्नू भन्ने गृहमन्त्रालय र आसपासका निकायको आदेश हुन्छ ।
सुदर्शनले जेलमा त्यो बाहेक छुट्टै केही खानुभएको छैन । उहाँले नियमित सेवन गर्ने औषधि, आवश्यक पर्ने लजेस्टीक अन्य साधारण खर्च पनि हामीले आफ्नो गास घटाएर पठाउने गरेका छौं । काठमाडौंमा ५ महिनादेखिको डेरा भाडा र बच्चाहरुको विद्यालयको शुल्कसम्म नतिरेरै उहाँको औषधि लगायतमा खर्च गरिएको अवस्था हो । हुन न निजी जीवनका सवालहरु बाहिर भन्न आवश्यक हुँदैन तर सुदर्शनले जेलमा के खायो ? के लायो ? भन्ने कुरा पनि मिडियामा आएपछि यहाँ केही लेख्न आवश्यक ठानिएको हो ।
दुनियाँलाई यो कुरा थाहा छ र नभएकाहरुलाई पनि हुनेछ कि प्रचण्ड बाबुरामलाई त्यो ठाउँमा पु¥याउन र गणतन्त्र ल्याउनमा सुदर्शनहरूको पनि रगत र पसिना लगानी मिसिएको छ । कौडीको मूल्यमा बेचेर खाएको प्रचण्डपथ (जसले प्रचण्डलाई त्यो उचाई प्रदान गरेको थियो र पुष्पकमललाई प्रचण्ड बनाएको थियो)को दार्शनिकीकरण गर्न सबैभन्दा बढी मेहेनत मोहन बैद्य ‘किरण’ र हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ले नै गरेको कुरा जगजाहेर छ । आज उनैको काँधमा चढेर एकथरी कमरेडहरु ४ लेन सडक ढाक्ने गरी ४, ५ वटा पुलिसका पछुवा गाडी लिएर गणतन्त्रका नयाँ राजा बनेका छन् । तिनै कमरेडहरुले क्रान्तिकारी जनताका एजेण्डा बोक्ने सुदर्शन, माइला लामाहरुलाई जेलमा कोचेका छन् । उनीहरुले दिनदिनै भनिरहेका छन्, सुदर्शनहरुलाई कडाई गर्नू, दायाँबायाँ गर्न नदिनू ।